Motherboard ပြဿနာတက်နေတာများလား — MYSTERY ZILLION
April 2010 edited June 2010 in Hardware
:cool: MSI Motherboard (775 board) ပါ CPU က Pentium4 3GHz ၊RAM က DDR2 1GB ပါ စက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့
CPU Fan လည်းလည်တယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် Window ပေါ်ကိုတက်မလာဘူး CMOS အထိတောင်မတက်ဘူး ဘာဆိုဘာမှ
ကိုပေါ်မလာတာ CPU Fan ကတော့လည်နေတယ် Harddisk တို့ Memory တို့ဖြုတ်ပြီးဖွင့်ကြည့်လည်း ဘာ Beat သံမှ
မပေးဘူး ဒါပေမယ့် CPU Fan ကျတော့လည်နေတယ် Memory တို့ CPU တို့များမကောင်းလို့များလားဆိုပြီးဖြုတ်လဲကြည့်
တယ် ကျန်တဲ့ Board မှာကျတော့တက်နေတယ်ဗျာ ကျန်တဲ့စက်က CPU တွေ Memory တွေအဲဒီဘုတ်မှာတပ်ရင်မတက်
တော့ဘူး အဲဒါ မားသားဘုတ်ကပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် အဲဒီဘုတ်က ကောင်းနိုင်ပါဦးမလား ကျွန်တော်ကတော့ပစ်ရမယ်ထင်
တာပဲ အော်ပြောဖို့မေ့နေလို့ Harddisk ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော အဲဒီ Harddisk ကိုတခြား MSI Board မှာသွားတပ်တော့
အရင်တစ်ပတ်ကပဲ MSI G31 Board ကအဲလိုဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒါ service ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်။
အဲဒါနဲ့ G31 Gigabyte ပြန်၀ယ်ထည့်ထားတယ်။
Bios update or re-install ပြန်လုပ်ကြည့်ပါလား
Motherboard ပျက်တယ်လို့လဲ တထစ်ချပြောလို့မရဖူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်ဗျာ. ကျနော်ထင်တာတော့ Motherboard ရဲ့ CPU အထိုင် Socket မှာ ကွိုင်ရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်. သေသေချာချာ ဖြုတ်တတ်ကြည့်လိုက်ပါလား. တစ်ခါတလေကျရင် သူတို့ရဲ့ အထိုင်တွေက ချောင်နေတတ်လို့ပါ. ထင်တာကိုပြောတာနော် ကြုံဖူးလို့..........
အပေါ်က ဘေဘီဘာ့ဒ် ပြောထားတဲ့ အထဲမှာ အကုန်ဖြုတ်စမ်း တာတော့ တော်တော် စုံသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု လိုနေတယ်ဗျ.။ ဘာလဲ ဆိုတော့ Power Supply ပါ။ power supply က ဗို့အားမနိုင်တော့ရင်လည်း အဲဒီလို ဖြစ်တက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါကြုံဖူးလို့ပါ။ G31/G33 ဘုတ်တွေပါ။ အဲဒီလိုပဲ CPU Fan လည်း လည်တယ်။ ပြီးတော့ ဘာမှ မတက်ဘူး။ ဖြုတ်စမ်းတာလည်း စုံနေတာပဲ။ နောက်ဆုံးကြတော့ Power supply လဲ တပ်ကြည့်လိုက်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲဗျာ.။ ကောင်းသွားပါတယ်။ အဲ.. နောက်တစ်လုံးကတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေတာ နောက်ဆုံးတော့ Board ကြွသွားပါတယ်။ warranty ရှိသေးတော့ ဆိုင်ပို့လိုက်လိုက်ရပါတယ်။
အဆင်ပြေ ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ...
နောက်ဆုံးတော့Power Supply ကိုလဲ လိုက်တော ့မှပဲ အဆင််ပြေသွားတယ်ဗျာ...
ဘာပဲပြောပြော ပညာရသွားတာပေါ့ ... ဟုတ်ဘူးလား...
ဆောရီးဗျာ ပြောဖို့မေ့သွားလို့ Power supply ကအရင်တုန်းကလည်းအဲဒီ Power supply ပါပဲ နောက်ထပ် Hardware အသစ်လည်း Install လုပ်တာမျိုးမရှိတော့ ကျွန်တော်က Power supply ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုထားခဲ့တာ အင်း ဘရားသားပြောသလိုဆို Power supply ကဖောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်လဲအဲလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ..Power Supply 600w နဲ့လဲစမ်းတာလဲမရဘူးဗျ...memoryကြောင့်ရောဖြစ်နိုင်ပါသလားခင်ဗျ..:frown:
Board Tester နဲ့စမ်းကြည့်ရင်ကော ဗျာ.... အတိုင်းအတာ တစ်ခု လောက်တော့ အကူအညီ ရမယ်ထင်တယ်..
Motherboard Troubleshooting အတွတ် အောက်က site လေးကို ညွှန်းပါရစေ ...
Power Supply ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။
beat သံမထွက်တာ၇ဲ့အဓိကလက်သည်က MB ပဲ။ တခြား devies တွေကဒုခပေး၇င်လဲသူပါေ၇ာကြောင်ပီး ဘာသံမှကိုမပေးနိုင်တော့တာတွေဖြစ်တက်ပါတယ်။ အခုပြောတဲ့အတိုင်းဆို၇င်တော့ MB ကြောင်ကြောင်နေတာ။ အဲ့ တခြားဟာတွေကောင်းတယ်လို့ယူဆ၇င် board ပေါ်မှာသံသယရှိနေ၇င်တော့် battry ကိုခနဖြုတ်ထားလိုက်ကြည့်။ 16 sec လိုတော့ပြောတာပဲ တကယ်တော့5min လောက်သာဖြုတ်ထားကြည့်ဗျာ။ ပီးမှပြန်တက်ပီးစမ်းကြည့်။ ထူးမခြားလာ၇င်တော့ supply voltage မမှန်တာပဲ။ အဲ့သလိုပဲထင်တာနော်....စမ်းကြည့် ၇၇င်မုန့်ကြွေးမ၇၇င်ပြသနာလာမရှာကြေး...
ကျွန်တော်လဲကြုံဖူးတယ်။အရင်ဆုံး memory clean လုပ်ပြီးပြန်တက်တယ်။ရသွားတယ်။နောက်တစ်စက်မှာတော့cmos ဖြုတ်ပြီးပြန်တပ်ပြီးpower onတာရတယ်။စမ်းကြည့်ပါနော်။